itnadamtui: ကိုယ့်ရဲ့ Comuputer လေးကို သူများတွေဖွင့်လို့မရအောင် Data Base Passwordပိတ်ထားချင်ပါသလား?
ကိုယ့်ရဲ့ Comuputer လေးကို သူများတွေဖွင့်လို့မရအောင် Data Base Passwordပိတ်ထားချင်ပါသလား?
ကွန်ပြူတာကို Password နဲ့ပိတ်တဲ့အခါမှာ window password နဲ့ပိတ်ကြတာများပါတယ် ဒီနည်းလေးကတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး Window ရဲ့ System (database)ကိုပိတ်တာပါ ပြုလုပ်နည်းကတော့....
Start ကနေ Run ကိုကလစ်ပါ သို့မဟုတ် (window key+r)ကိုတွဲနှိပ်ပါ.. Run Box ပေါ်လာရင်တော့ အဲဒီထဲကို syskey လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ... Securing the windows xp account database ခေါင်းစဉ်နဲ့ box ပေါ်လာရင်တော့ Update ကိုကလစ်ပါ...
Startup key ခေါင်းစဉ်နဲ့ box တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပါမယ် အဲဒီမှာ အပေါ်ဆုံးက Password Startup ဆိုတာလေးကို Select လုပ်ပြီးတော့ Password နဲ့ Comfirm မှာ အတူတူရိုက်ထည့်လိုက်ပါ... Password မှာ 123456 ရိုက်ရင် Comfirm မှာလဲ 123456 ပဲရိုက်ထည့်ပါ... ပြီးရင်တော့ OK ကိုလကစ်လိုက်ပါ Restart လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
အဲဒီ Password ကိုပြန်ဖျက်ချင်တော့ ခုကလိုပဲ ပြန်ဝင်လိုက်ပါ
Start>Run> syskey ရိုက်ထည့် Enter နှိပ်ပါ >Securing the windows xp account database နဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ Update ကိုပြန်ကလစ်ပါ...
Startup Key ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ System Generated Password ကိုပြန်ရွေးပြီး အိုကေလိုက်ပါ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် အဆင်မပြေရင်တော့ Format သာချလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာ... :D
Indsendt af itnadamtui kl. 20.19
Free Microsoft Office...->Hih na mek in
Enter your Product Key-> XF9HV-MG4CV-KCK8F-T39WK-XW3QR
hih zong ki sam Microsoft Office 2010 Activation Tools
ထားခဲ့သမျှ juli (5) august (62) september (178) oktober (167) november (91) december (47) januar (28) februar (44) marts (45) april (31) maj (16) juni (4) juli (6) august (7) september (5) oktober (3) november (2) december (1) januar (1) juni (9) juli (2) august (3) september (2) november (5) april (1) maj (1) september (4) oktober (3) november (1) januar (2) maj (1) oktober (3) november (2) juli (5) september (1) november (1)
itnadamtui. Simple tema. Temadesign af andynwt. Leveret af Blogger.